Free service online. Ukubalwa kahle, imbobo cylindrical
umdwebo ngezinga 1: 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6
Top ububanzi D1
Ububanzi Bottom D2
Ukubalwa emithonjeni noma imigodi ijamo cylindrical
D1 - Upper ububanzi imithombo
D2 - ububanzi phansi kahle
H - Ukujula
Ngaphezu kwalokho, ungacacisa izindleko ukumba umthombo futhi izindleko ukususwa inhlabathi.
Kukhona ezintathu ongakhetha amanzi supply emizi yabantu. Ungakwazi sokuprakthiza imbobo ngokwakho, ungakwazi ukuqasha ochwepheshe ngale nhloso, kodwa ungakwazi umbe kahle esakhiweni. Zonke izindlela kunezimo futhi bobabili nebubi. Abaningi bakhetha ukuhlela for site zakho kahle, ngoba kungcono eshibhile, ungakwazi ukuyisebenzisa iminyaka engaphezu kuka-50 futhi ukuhlanza le ukwakhiwa lula kakhulu ukwedlula kahle. Ngaphandle imithombo ukumba akudingi imvume ekhethekile. Nokho, ukumba umthombo esizeni lakho, wena kufanele kuqala ezinye izibalo. Lapha kuzosiza yethu Uhlelo calculation. Odinga ukukwenza ukungena emasimini esifanele kahle ukujula, ububanzi bayo phezulu kanye phansi kanye nezindleko ukumba endaweni yakho, bese isimiso ngeke abale ivolumu kahle futhi izindleko ezilinganiselwa ukumba.
Ngokuyinhloko ngo ezimele yokumba imithombo ukukhethwa indawo ngaye. Kubalulekile ukuba ukuyivala ngaphakathi endaweni engaba 50 mitha kwakukhona umquba storages kanye nezinye ukungcola okungase kuthinte izinga lamanzi. Akubalulekile ukuba ubambe kahle eduze kuka 5 amamitha ukusuka endlini. Kungenjalo kukhona ingozi umonakalo isisekelo sendlu ngenxa leaching inhlabathi.
Kubalulekile futhi ukuba anqume of the kahle ukujula. Lokhu kungahlukanisa izakhiwo efanayo ezigabeni esingaphesheya noma hole pre-yamba ukujula.
Qaphela ukuthi awukwazi ukumba umthombo ngasiphi isikhathi sonyaka. It is kangcono le nkathi kusukela ngoJuni ukuze September. Ngalesi sikhathi, le yamanzi uphansi, okusho ukuthi ngeke angene iphutha kusukela izingqimba engenhla amanzi elisuke emva izikhukhula entwasahlobo.
Into olandelayo kufanele ukhathazeke ndlela kuzoqinisa ezindongeni kahle. Lapha kukhona ongakhetha eziningana. Lokhu uhlaka lokhuni, ukhonkolo Monolithic futhi izitini. Ngayinye yalezi ngezindlela zokuqinisa kunezinzuzo ezithile. Ngokwesibonelo, ifremu eshibhe lokhuni. Kodwa ngokwenza kanjalo buhlala. Term wakhe yesevisi esingeqile eminyakeni eyi-15. Ngaphezu kwalokho, kufanele zihlanzwe njalo ngonyaka kusukela sludge. Futhi ngesikhathi yokumba izindonga emgodini kungukuthi aqiniswa, okubangela ingozi ukuwohloka emhlabeni.
Ukhonkolo Monolithic kuhle ukuthi kungafaki kwamanzi abangeni kahle. Kodwa kuhle okunjalo isikhathi eside, futhi lubekelwe kakhulu ezibizayo. Lapha une ezimbili ongakhetha. Yenzani amafomu ukhonkolo ukuze baqinise izindonga wena noma uthenge kubo. Ngaphambi kokuba unqume kanjani ukuqhubeka, sicela uqaphele ukuthi imboni kwagcizelela ukhonkolo ring kunamandla kunalezo ukuthi ungakwazi ukwenza ngokwakho. Kodwa, of course, futhi bayohlala kubiza ngaphezulu.
Well ukwakhiwa ngezitini kudinga amakhono akhethekile nokuqeqeshwa okuqhubekayo. Walls kudingeka ukuba kwagcizelela, futhi isitini ukwakha isisekelo. Kodwa, like ukhonkolo, isitini ayivumeli kokuziphatha amanzi ebusweni singene kahle.
Emva kahle usulungile
Yimiphi uhlobo device oyikhethile kahle, ngezikhathi ezithile kudingeka disinfected. Cleaning kufanele kwenteke lokungenani kabili ngonyaka futhi njalo uma izinto angaphandle awele kahle. Ngokuba ukuhlanza kahle ngosizo futha amanzi akhishwa. Bese, siya phansi, senza izinqubo ezidingekayo ukwelashwa. Uma izinto angaphandle, daka, isihlabathi futhi ukungcola zisuswa phansi kanye izindonga kahle, zokukhipha igciwane. Ukuze wenze lokhu, izindonga kahle usebenzisa umshanelo noma kulengela isihlwathi eside Karbaspray bleach.
Lapho kahle ugcwele amanzi aphinde, kufanele futhi wengeze bleach e isamba 150 mg ngayinye 1 litre amanzi. Water futhi wabashukumisa kahle, embozwe ngesivalo, agcinwe amahora amabili. Amanzi uyaphinda ke akhishwa wageza kahle ngamanzi acwebileyo. Inqubo iyaphindwa kuze iphunga chlorine iphele.